Maxay yihiin labada Shabaab ee is waca ee General Mascuud uu farta ku fiiqay? | Dhacdo
Maxay yihiin labada Shabaab ee is waca ee General Mascuud uu farta ku fiiqay?
General Mascuud Maxamed Warsame, Taliyaha Guutada 15aad ee Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka ayaa ku baaqay in si wadajira lagula dagaalamo waxa uu ugu yeeray ‘Labada Shabaab ee is waca’.
Taliyaha ayaa marka hore ka tacsiyadeeyay geerida Taliyihii Nabad Suggida ee Magaalada Dhuusamareeb, Cabdirashiid Cabdi Shiikhdoon (Qooje) iyo sagaal askari oo kale oo shalay lagu dilay qarax ka dhacay nawaaxiga deegaanka Ceeldheere, oo ku yaala wadada xiririisa Magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guriceel.
Taliyaha ayaa sheegay inaanan maalin kasta tacsi lagu jiri karin, taasi bedelkeedana uu ku baaqayo in si wadajira lagula dagaalamo labada Shabaab ee is waca.
“Waxaan ku baaqayaa tacsi kuma jiri karnee labada Shabaab ee is waca, in si wadajir ah ula dagaalno.” Ayuu yiri Taliyaha oo warkan ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook.
Ma cadda waxa uu ula jeedo labada Shabaab ee is waca, waxaase loo fasirtay mid uu ku muujinayo in Maamulka Madaxweyne Qoorqoor ay ku soo hoos dhuunteen xubno taabacsan maleeshiyada Al Shabaab.
General Mascuud ayaa ka tirsanaa Saraakiishii Ahlu Sunada Gobolada Dhexe ee la qarameeyay bartamihii sanadkii 2019. Xoogagii Ahlu Sunna ayaana xilligaa lagu biiriyay Taliska Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka.
Tan iyo markii uu xafiiska la wareegay Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa habacsanaan amni laga dareemay deegaanada Galmudug, oo Dhuusamareeb ay ugu horeyso.
Ka hor intii aanu xilka qaban Madaxweyne Qoorqoor ayay xaalad amni oo leesku halleen karo ka jirtay Gobolada Dhexe, taasoo ku timid Ahlu Sunna oo lagu ammaanay mid taqiinay xeeladda dagaal ee mintidiinta Al Shabaab.
Dadka qaar ayaase qaba in amni darrada maanta ka jirta deegaanada Galmudug ay ka dhalatay doorashadii lagu kala qaybsamay ee 2-dii bishii February ee sanadkii hore lagu soo doortay Madaxweyne Qoorqoor.